Ligue 1 - LOSC - Stade de Reims ( 1-1) - ewa.mg
Ligue 1 – LOSC – Stade de Reims ( 1-1)
LOSC - Stade de Reims ( 1-1) vidéo.
Ligue 1 Conforama - Saison 2018/2019 - Andro faha 17 - Stade Pierre Mauroy - Alahady 9 décembre 2018
Buteurs : Rémi OUDIN (64' - Stade de Reims) / Nicolas PEPE (90' +6 pen - LOSC)
Composition LOSC : 6 - José FONTE (c) / 7 - Rafael LEAO / 8 - XEKA / 11 - Luiz ARAUJO / 12 - Jonathan IKONE / 16 - Mike MAIGNAN / 17 - Zeki CELIK / 19 - Nicolas PEPE / 22 - Yves DABILA / 23 - Thiago MENDES / 25 - Fodé BALLO-TOURE
Composition Stade de Reims : 2 - Björn ENGELS / 3 - Ghislain KONAN / 4 - Alaixys ROMAO (c) / 5 - Yunis ABDELHAMID / 7 - Xavier CHAVALERIN / 10 - Hyunjun SUK / 12 - Pablo CHAVARRIA / 16 - Edouard MENDY / 17 - Aly NDOM / 25 - Moussa DOUMBIA / 32 - Thomas FOKET
Ligue 1 - LOSC - Stade de Reims
Ny fifaninanana eo amin’ny MVP : ireo pourcentages mampitolagaga ataon’i Stephen Curry
Isan-kerinandro dia hanolotra anareo izahay ny Top 5 ireo mpilalao NBA mahay indrindra, raisina ao anatin’izany ny fahaizana manokana sy ny fahaizan’ny Ekipany. Amin’ity herinandro ity dia mandinika manokana ny momba an’i MVP amin’ity fiandohan’ny taom-pilalaovana ity isika, Stephen Curry. Ilay meneur an’ny Warriors dia ao anatin’ny 100% ny heriny sy ny tanjany ankehitriny, ary misy fiatraikany izany eo amin’ny fomba filalaony. MVP indroa ary Champion NBA intelo izy, tsy mila mi-forcer n’inon’inona eo ampilalaovana, ary izany dia hita taratra eo amin’ny isa marika mahatalanjona ananany : 50-50-90. Inona reo isa marika ireo hoy ianao ? 50% eo tifitra, 50% amin’ny 3 points ary 90% eo amin’ny Lancer Franc, mahatalanjona Teo amin’ny tantara dia olona tokana no nahavita ohatr’izay, ary tsy iza fa i Steve Kerr, izay fantatr’i Stephen Curry tsara. Tamin’ny 1996 izany, ary ilay mpitifitry ny Bulls fahiny izay mpanazatra ny Warriors ankehitriny dia namarana ny taom-pilalaovana 1996 tamin’ny 50.6%, 51.5% et 92.9%. Kanefa izao, tsy noraisina izany perf nataon’i Steve Kerr izay satria tsy nahatratra ny fatra eo amin’ny tifitra sy ny lancer franc farafahakeliny izy tamin’izay. Steve Nash no nanakaiky an’izany… Vokan’izany : ankehitriny aloha dia ny 50/40/90 no mijanona ho « référence » ho an’ireo mpitifitra, telo taona lasa izay, izay no tanjon’i Stephen Curry : « Ao anatin’ny match 82, ny tanjoko dia ny hiditra ao amin’ny fikambanan’ny 50/40/90. Anisan’ny tanjoko izany ary tiako ho vitaina izany. » Ho vitany izany tamin’ny 2016 satria dia tafiditra tao anatin’ny tontolo avo lenta izay mpilalao 6 fotsiny no nahavita izany : Larry Bird, Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash, Dirk Nowitzki ary i Kevin Durant. Ny tena mahatalanjona dia i Nash satria ilay mpitondra baolin’i Suns taloha dia nahavita izany in’efatra ka ny iray tamin’ireo dia 50/47/91 tamin’ny 2008. Amin’izao lalao 11 izao no vita amin’ity taom-pilalaovana ity, i Stephen Curry izany dia nahavita tsara noho i Steve Nash dia ny 52%, 51% et 92%. Fa ny azy dia eo ampamonoana 31.3 points de moyenne ! Izay koa dia mbola zava-bita mahatalanjona iray, satria milalao latsaky ny 34 minitra isaky ny lalao izy (33.9 raha ny tena marina), ary teo amin’ny tantara dia tsy nisy mpilalao nanao 30 points de moyenne izany raha nilalao minitra vitsy toy izany. Ny tokana nanakaiky izany dia i … Sephen Curry tamin’ny 2016 raha nanao 30.1 points isaky ny lalao izy tao anatin’ny 34.2 minitra. Ny TOP 5 androany 6 NOVEMBRE 1– Stephen Curry Bilan : Warriors – 10v-1d – 1er à l’Ouest Stats : 34 min, 31.3 pts, 6.1 pds, 5.4 rbds, 1.1 int, 0.4 ct, 3.1 bps, 52.5% tirs, 50.8% 3-pts, 92% LF 2 – Giannis Antetokounmpo Bilan : Bucks – 8v-1d – 2e à l’Est Stats : 31 min, 26.1 pts, 13.9 rbds, 5.9 pds, 1 int, 1.4 ct, 4.9 bps, 53% tirs, 10% 3-pts, 71% LF 3 – Kevin Durant Bilan : Warriors – 7v-1d – 1er à l’Ouest Stats : 35 min, 27.7 pts, 7.5 rbds, 5.9 pds, 0.9 int, 0.6 ct, 2.6 bps, 57% tirs, 39% 3-pts, 93% LF 4 – Kyle Lowry Bilan : Raptors – 10v-1d – 1er à l’Est Stats : 34 min, 17.9 pts, 4.5 rbds, 11.5 pds, 1.5 int, 0.5 ct, 2.8 bps, 50% tirs, 41% 3-pts, 81% LF 5 – Nikola Jokic Bilan : Nuggets – 9v-1d – 2e à l’Ouest Stats : 29 min, 17 pts, 10 rbds, 7.7 pds, 1.1 int, 1 ct, 2.8 bps, 52% tirs, 38% 3-pts, 83% LF Mentions : DeMar DeRozan, Damian Lillard, Victor Oladipo, Russell Westbrook, Joel Embiid, LeBron James…
NBA – Voka-dalao 28 Novembre 2018 Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers
Thunder / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. George 25 8/13 1/2 1/1 2 2 4 4 5 0 5 2 18 18 J. Grant 34 8/12 1/4 4/5 1 4 5 0 0 0 1 4 21 24 S. Adams 33 3/6 0/0 0/0 1 4 5 1 1 1 1 2 6 11 R. Westbrook 37 10/17 2/5 1/2 1 18 19 15 3 2 3 0 23 48 A. Abrines 27 1/9 1/8 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 3 -1 N. Noel 14 3/4 0/0 2/2 1 2 3 1 0 0 1 1 8 11 P. Patterson 13 0/2 0/1 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 1 A. Nader 7 2/2 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 7 T. Davis 1 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 R. Felton 6 1/2 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 D. Schroder 23 2/9 0/3 2/2 0 2 2 1 4 1 1 0 6 2 T. Luwawu-Cabarrot 4 0/3 0/2 1/2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 -3 D. Burton 16 3/6 1/2 1/1 0 2 2 0 0 0 0 2 8 9 Total 41/86 6/27 12/15 8 42 50 25 18 5 13 11 100 Cavaliers / 83 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Nance Jr. 36 3/5 1/2 0/0 2 8 10 2 3 0 1 0 7 16 C. Osman 40 6/14 2/6 0/0 0 10 10 6 2 0 1 0 14 21 T. Thompson 35 2/8 0/0 0/0 0 2 2 2 4 1 3 0 4 0 C. Sexton 38 9/20 1/2 2/2 1 9 10 3 2 1 2 0 21 22 R. Hood 35 5/12 1/4 1/2 1 2 3 4 3 1 0 0 12 12 A. Zizic 13 0/4 0/0 0/2 2 3 5 1 1 0 2 1 0 -1 J. Clarkson 32 10/22 4/8 1/3 1 2 3 2 2 1 0 0 25 17 A. Harrison 12 0/4 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 -7 Total 35/89 9/23 4/9 7 36 43 20 19 4 12 1 83
Beach soccer – «Can 2018»: resin’ny Faraonan’i Egypta ny Barea
Niondrika teo anatrehan’ny Faraonan’i Egypta ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja beach soccer. Tsy maintsy mandresy an’i Maraoka ny Malagasy, anio.Tsy nitohy ny fahombiazana, ho an’ny Barea de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), beach soccer. Fihaonana, tanterahina any amin’ny torapasika Charm el-Cheikh, any Egypta. Resin’ny Faraonan’i Egypta mantsy, omaly, ny Malagasy, teo amin’ny andro faharoa, amin’ny fifanintsanana ho an’ny vondrona “A”. Lavon’ny Egyptianina, tamin’ny isa 4 no ho 2, isika.Niady ny fihaonana, araka ny tati-baovao ary tena niendrika famaranana kely ny lalaon’ny roa tonta. Nanohitra hatramin’ny farany ny Barea, nanantombo teo amin’ny isan’ny fanafihana. Porofon’izany, nahatratra 13 ny isan’ny dakan’ireo mpilalao malagasy notarihin’i Tiana (Tsiliva) sy i Angeluc ary i Giovanni, nanitsy ny tsatoby egyptianina, raha sivy monja ny an-dry zareo Faraona.Nitarika tamin’ny isa, 2 no ho 0, ny Egyptianina vao nanenjika ny Malagasy, teo amin’ny 10 mn faharoa. Nifamaliana ny fanafihana avy eo, saingy tsy nisy afa-tsy 2 ihany ny baolina tafiditry ny andaniny sy ny ankilany.Nomena “pénalty” roa Nitranga kosa ny tsy nampoizina, teo amin’ny tapa-potoana fahatelo farany. Nahazo “pénalty” indroa misesy ry zareo Faraona, samy maty avokoa, ka nahazoan’izy ireo fandresena. Voalazan’ny loharanom-baovao fa nitongilana tamin-dry zareo mpampiantrano ny mpitsara, tamin’ity fihaonana ity.Ho an’ity sokajy “A” ity ihany, lavon’i Maraoka, tamin’ny isa tery 5 no ho 4, ry zareo Ivorianina. Mila mandresy an’i Maraoka izany ny Barea de Madagascar, anio, eo amin’ny lalao farany, ho an’ny fifanintsanana raha mbola te hanohy ny fifaninanana. Lalao famaranana kely ny an’ny roa tonta satria hangoron-damba izay resy.Ny an’ny vondrona “B” indray, niondrika teo anatrehan’ny Voromaherin’i Nizeria, tamin’ny isa 4 no ho 2, koa i Tanzania, ho an’ny vondrona “B”. I Tanzania sy Côte d’Ivoire izay efa samy mihintsana avokoa amin’ity “Can 2018”, taranja beach soccer, ity. TompondakaL’article Beach soccer – «Can 2018»: resin’ny Faraonan’i Egypta ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» Tsy afaka hiatrika ny ampahefa-dalana i Mbappé
Malahelo ny vahoaka parizianina, satria tsy afaka ny hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions” miaraka amin’ny Paris St Germain ilay kalazalahy, i Kylian Mbappé. Tsy afaka miakatra kianja mandritra ny telo herinandro ilay lohalaharan’ny Paris St Ger­main, i Kylian Mbappé. Anton’ izany, ny faharatrana nahazo ny kitrokeliny eo amin’ny tongony havanana. Ny zoma 24 jolay lasa teo, nandritra ny lalao famaranana natao tao amin’ny kianja Stade de France, niadiana ny amboaran’i Frantsa andiany faha-13, nandresen’ny PSG ny AS St Etienne, tamin’ny isa to­kana, 1 no ho 0 no nahavoadona azy. Baolina tafiditr’i Ney­mar, teo amin’ny minitra faha-14. Araka izany, tsy afaka ny hiatrika ireo lalao roa goavana miandry ny PSG, i Mbappé. Anisan’izany ny famaranana hiadiana ny amboaran’ny ligy, hotontosaina ny zoma 31 jolay ho avy izao, hifandonana amin’ny Lyon ary ny ampahefa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, hikatrohan’ny PSG amin’ny Atlanta Berga­me, ny 12 aogositra ho avy izao. Fihaonana hotanterahina any Lisbonne. Raha tsiahivina, fianjerana vokatry ny “tacle” nataon’i Loîc Perrin, kapitenin’ny St Etienne, teo amin’ny minitra faha-31 no nahazo an’i Mbap­pé. Voatery niala mihitsy izy ary tsy afaka mandeha fa nitondra tehina roa. Niteraka sahotaka teo amin’ireo mpilalao teny ambony kianja izany famelezan’i Perrin an’i Mbap­pé, izany. Voatery nampiasaina ny Video assistant referees (VAR), nijerena ny fahadisoana. Nahazo karatra mena i Perrin, taorian’ny fahitana fa mampidi-doza ary mifanohitra amin’ny lalànan’ny baolina kitra ny zavatra nataony. Tsiahivina fa efa tratry ny tranga toa izao ihany koa i Neymar, ny taona 2018 sy 2019 ka tsy afaka niatrika ny lalao ampahavalon-dalana miverina, tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, ihany koa.TompondakaL’article Kitra – «Ligue des champions d’Europe» Tsy afaka hiatrika ny ampahefa-dalana i Mbappé a été récupéré chez Newsmada.
NBA – Voka-dalao 3 Decembre 2018 – Cleveland Cavaliers vs Brooklyn Nets
Nets / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hollis-Jefferson 22 1/7 0/1 2/6 2 3 5 1 2 0 0 0 4 0 J. Allen 32 4/7 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 9 10 S. Dinwiddie 32 6/14 4/11 2/3 1 2 3 4 5 1 1 0 18 16 D. Russell 33 13/31 4/12 0/1 4 4 8 6 1 2 1 0 30 26 A. Crabbe 33 1/7 1/5 2/2 1 7 8 2 4 1 0 0 5 10 E. Davis 16 1/3 0/0 0/0 3 7 10 0 3 0 1 1 2 10 R. Kurucs 14 6/10 0/2 0/0 2 2 4 0 2 1 1 0 12 12 J. Dudley 18 1/3 0/0 1/2 2 0 2 1 1 0 0 0 3 3 D. Carroll 23 1/7 0/4 2/2 0 3 3 0 0 0 1 0 4 0 S. Napier 18 5/10 0/3 0/0 2 2 4 2 1 0 1 0 10 10 Total 39/99 10/40 9/16 17 33 50 17 20 5 7 2 97 Cavaliers / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Osman 28 2/6 0/2 4/4 0 7 7 1 2 0 1 1 8 12 T. Thompson 34 8/11 0/0 3/4 6 8 14 2 4 0 2 2 19 31 G. Hill 35 2/7 0/0 2/2 2 3 5 2 3 1 2 0 6 7 C. Sexton 32 7/16 1/1 0/0 1 0 1 2 1 1 0 0 15 10 R. Hood 34 2/8 0/3 5/5 0 2 2 2 4 1 2 0 9 6 L. Nance Jr. 16 3/5 1/1 2/2 2 6 8 1 0 1 0 1 9 18 J. Jones 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Clarkson 28 9/22 1/4 1/1 3 8 11 4 1 1 2 0 20 21 A. Burks 29 5/13 1/4 2/2 0 7 7 1 2 0 0 0 13 13 Total 38/88 4/15 19/20 14 41 55 15 17 5 9 4 99